Tsy misy ny famatsiam-bola : maro ny lalam-pirenena potika | NewsMada
Tsy misy ny famatsiam-bola : maro ny lalam-pirenena potika
Mionona amin’ny vola azo eto an-toerana avy amin’ny hetra, toy ny Tahirimbola hikojakojana ny lalana (Fer) ny fanjakana. Na nokabarina nanomezana toky fa hatao aza, jerem-potsiny ireo lalam-pirenena tena potika, toy ny RN-6 (Ambilobe Antsiranana), ny RN 44, RN5,… satria tsy misy ny famatsiam-bola azo antoka.
63 miliara Ar ! Io ny tetibola ampiasain’ny fanjakana « hikojakojana » ireo lalam-pirenena manerana ny Nosy amin’ity taona ity. Avy amin’ny hetra alaina any amin’ny mpaninjara solika io vola io, hatokana ho an’ny Tahirimbola hikojakojana ny lalana (Fer).
Raha zohina, asa andavanandro fanao ny fikojakojana ny lalana satria efa misy ny tetibola manokana ho amin’izany. Tsy misy kosa ny famatsiam-bola ho an’ny fanatsarana na fanarenana na fanaovana lalam-baovao, afa-tsy ny arabe nandraisana ny Frankofonia, vao natao eny amin’ny vahilava sy ny eny Tsarasaotra mankeny Ivato, nifampiraharahana tamin’ny Sinoa, izay tsy nampahafantarina amin’ny besinimaro ny takalony mivantana na ankolaka.
Ny taona 2016, nanome toky ny fitondrana fa hanomboka amin’ity taona 2017 ity ny fanarenana ny lalam-pirenena fahenina (RN 6), mampitohy an’Ambilobe hatrany Antsiranana. Nopasohina indray mandeha monja ny ampahan-dalana tena ratsy, ary tsy nitohy intsony ny asa. Tsy misy asa manomboka, toraka izany, koa ny RN 3A, mampitohy an’Ambilobe-Vohemar. Ny hany nambara farany teo, eo am-panaovana ny tombam-bidy sy mijery ny lafiny teknika ny Vondrona eoropeanina (UE), izay marihina fa famatsiam-bola tsy averina, andaniny, ary ny Sinoa, etsy ankilany.
Takalon’aina politika ny RN 44
Fanaon’ny mpanao politika takalon’aina koa ny hanaovana godirao ny mankany Ambatondrazaka (RN 44). Anisan’ny tena manapotika ny RN 44 ny fiarabe mitatitra harena an-kibon’ny tany amin’iny lalana iny. Hatreto, fanomezana sy asa soa ny nanaovana ny ampahany sasany azy. Nanao maimaimpoana ny Japoney, eo Moramanga hatreo Marovoay (20 km). Natao rarivato ny ampahan-dalana sasany. Fanomezan’ny Vondrona eoropeanina, novatsiny vola maimaimpoana, ny tetezana ampolony.
Sompitr’i Madagasikara ny any Alaotra, ary anisan’ny nambaran’ny minisitry ny Asa vaventy tany aloha fa hatao laharam-pahamehana ireo lalana manana lanja ara-toekarena toy ny mankany Ambatondrazaka. Tsy nanao izany (aiza ny fitohizan’ny raharaham-panjakana?) ny minisitra nandimby azy. Ankoatra izany, tsy misy resaka mihitsy ny fanarenana ny lalana mampitohy ny RN 4 mankany Marovoay (faritra Boeny), zara fa mirefy 12 km, nefa sompitra faharoan’i Madagasikara koa.
Tsy ampiharina ny lalàna
Vao mainka manampy ny hafa koa ny fahasimban’ny ampahan’ny RN 5 avy eo Toamasina mankany Foulpointe. Nifanilihana ny andraikitra nandritra ny fitondrana Tetezamita, voatery nanao ny orinasa sinoa Mainland. Nataony zara fa vita anefa satria tsy naharitra na dia anisan’ny tena mpanimba an’iny lalana iny aza ireo fiarabeny mitatitra ny fasimaintiny avy any Soanierana Ivongo. Raha ny lalàna, tsy azon’ny kamiao vaventy itaterana harena ambanin’ny tany ny lalam-pirenena. Tsy arahina izany eto amintsika fa ny fanjakana ihany no manome alalana manokana ireny orinasa vahiny vaventy ireny matoa afaka mampiasa malalaka ny lalam-pirenena, tsy sakanan’ny mpitandro filaminana ny fiarabeny.